Chromecast တွင် mirroring ကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း Androidsis
ငါနောက်ဆုံးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သောအရာတစျခု Google Chromecast ဝယ်ယူမှုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းဟာနောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုမှာပါ။ ၎င်းသည် Mirror ကိုခွင့်ပြုထားသည်သို့မဟုတ် Cast screen ဟုလည်းခေါ်သည် ငါတို့တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်း အတွက် ငါတို့ရုပ်မြင်သံကြားမှာငါတို့လုပ်နေတာအားလုံးကိုကြည့်ပါ.
အဖြစ်မှန်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်, ထိုဖြစ်ပါတယ် terminal အနည်းငယ်ကသာဤ option ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Chromecast တွင်ခွင့်ပြုသည်, နှင့်ကဲ့သို့သောသဟဇာတထုတ်ကုန်များ၏တ ဦး တည်းရှိခြင်း LG က G2၎င်းသည်မူရင်း LG firmware ကို အသုံးပြု၍ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အလွန်တောင့်တသော Cyanogenmod snapshoot M8 ဗားရှင်းကိုရိုက်ကူးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်သွန်း, ကနေမရရှိနိုင်ပါ Chromecast ကို။ ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ရှိဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအသုံးပြုသူမှကျေးဇူးတင်ပါသည် XDA Developersဖြစ်နိုင်ပြီးသား မထောက်ပံ့သောကိရိယာများပေါ်တွင် Chromecast တွင်ထင်ဟပ်ပြသမှုကို enable လုပ်ပါ.
1 မပံ့ပိုးသောကိရိယာများပေါ်တွင် Chromecast တွင်ထင်ဟပ်ပြသရန်အတွက်လိုအပ်ချက်များ
2 မပံ့ပိုးသောကိရိယာများပေါ်တွင် Chromecast တွင်ထင်ဟပ်ပြသမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
မပံ့ပိုးသောကိရိယာများပေါ်တွင် Chromecast တွင်ထင်ဟပ်ပြသရန်အတွက်လိုအပ်ချက်များ
တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်များမှာ version တစ်ခုကို run နေသော terminal တစ်ခုရှိရန်ဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် 4.4 Kit Katနှင့်၎င်းတွင် superuser ခွင့်ပြုချက်များလည်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်ရှိသည် အမြစ်တွယ်.
En Androidsis ပါ သငျသညျဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မည် Android device တိုင်းကို root လုပ်နိူင်တယ် အတူရှိပြီးသား သတ်သတ်မှတ်မှတ်သင်ခန်းစာများ သင့်ရဲ့မော်ဒယ်နှင့်အတူအခြားသူများသည် သင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်ယေဘုယျအစီအစဉ်များ ကြောင်းများအတွက်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည် အဆုံးမဲ့ Android ဆိပ်ကမ်းများ။
မသန်စွမ်း Chromecast တွင် mirroring ကို enable လုပ်ပါ နှင့်ပျော်မွေ့ မပံ့ပိုးဟုယူဆသောဆိပ်ကမ်းများပေါ်တွင်ဖန်သားပြင်ကိုချထားပါကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ၏ဖော်ပြချက်တွင်ကျွန်ုပ်ထွက်ခွာတော့မည့် apk ကိုသာသင် download လုပ်ရမည် Androidsis You Tube ရုပ်သံလိုင်း.
apk ကို execute လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ဗီဒီယိုမှညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည် မပံ့ပိုးဟုယူဆသောဆိပ်ကမ်းများရှိ Chromecast နှင့်မှန်ကန်စွာထင်ဟပ်ပြသခြင်း အက်ပ်နှင့်အတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » မပံ့ပိုးသောကိရိယာများပေါ်တွင် Chromecast တွင်ထင်ဟပ်ပြသမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တွင် chromecast နှင့် Nexus5(ဇာတိ Android and ထိစရာမလိုဘဲ) ရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်သဟဇာတမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ တကယ်လား။ Tssss
ကျွန်ုပ်၏ motorola X ပေါ်ရှိ apk ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်၍ ၎င်းဖိုင်သည်ဖွင့ ်၍ မရပါဟုပြောပါသည်။
အရာအားလုံးနီးပါး pixelated ပုံရသည်။
Samsung Galaxy Note4တွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်